Waa kuma yaxaaska soo rogaalceliyay ee Zimbabwe? - BBC News Somali
Waa kuma yaxaaska soo rogaalceliyay ee Zimbabwe?
Dadkii u soo dagaalamay xoriyadda Zimbabwe sannadihii 1970yadii ayaa in badan awooda dalka soo maamulay
Dad badan oo reer Zimbabwe ah kama dahsoonayn in Emmerson Mnangagwa uu jeclaan lahaa in uu xilka madaxweynenimada ka badalo Robert Mugabe.
Mugabe-na wuxuu u muuqday in uu sidaa la rabo, maalin ayuuna jagooyin sarsare ka siiyay xisbiga talada haya ee Zanu-PF iyo dawladdaba, taas oo dhalisay in la isla dhexmaro in Mnangagwa uu u yahay "dhaxal suge muuqda", laakiin markii dambe ayuu baalasha ka rifay ka dib markii uu damiciisa aad u sii caddaystay.
Laakiin eryitaankii u dambeeyay ayaa loo arkaa in uu soo afjaray dulqaadkii ninkan lagu magacaabo "yaxaaska".
Ka dib markii uu madaxweynuhu eryay Mnangagwa shaacana ka qaaday in uu khayaannay, taageereyaashiisa iyo laamihii ammaanka ee uu magaca ku yeeshay ayaa hawshii soo dhexgalay iyaga oo isaga matalaya.
Jeneraal Constantino Chiwenga (bidix) ayaa xulafo la ah Mnangagwa
Wuxuu gacan ka gaysatay hagidda dagaalkii xornimada ee Zimbabwe ee 1970-yadii, intaas ka dibna wuxuu noqday madixii sirdoonnada intii uu socday dagaalkii sokeeye ee 1980kii, markaas oo kumannaan shacab ah la laayay.
Wuu diiday in uu wax door ah ku lahaa, xasuuqa, wuxuuna ku eedeeyay milatariga.
Laakiin wuu khaldan yahay qofkii is leh madaxweynenimada Mnangagwa waxay keeni doontaa in ay soo afjaranto tacaddiyada xuquuqda aadanaha ka dhanka ah, dadka dhaliishanna waxay sheegeen in 71 jirkan uu gacmaha dhiig ku leeyahay.
Mugabe 'ma jiifee indhuhuu nasinayaa'
Mugabe oo lo' ugu deeqay Midowga Afrika
Wuxuu ku magac dheer yahay "yaxaas" waana astaanta qabiilkiisa, laakiin si wanaagsan ayuu ugu haboon yahay magacaasi. Sidaas daraadeedna taageereyaashiisana waxaa loogu yeeraa "Lacoste".
Waa kuma Emmerson Mnangagwa?
Waxaa loo yaqaanna "yaxaas" sababtoo ah qabiilkiisa ayay astaan u tahay. Taageereyaashiisana waxaa loo yaqaannaa "Lacoste".
Tababar milatari ayuu ku soo kala qaatay Shiinaha iyo Masar.
Wuxuu gacan ka gaystay hagidda dagaalkii xorriyadda ee 1970yadii.
Wuxuu madax u soo noqday sirdoonkii dalkaas intii ay socdeen dagaalladii sokeeye ee 1980yadii, markaas oo kumannaan shacab ah la laayay.
Waxaa loo arkayay isku xiraha ciidammada, laamaha sirdoonka iyo xisbiga Zanu-PF.
Waxaa lagu eedeeyay in uu maleegay weerarro lagu qaaday taageerayaasha mucaaradka doorashadii 2008-dii ka dib.
Xiriirka uu Kongo la leeyahay
Mnangagwa wuxuu ku dhashay gobolka dhexe ee Zvishavane wuxuuna ka soo jeeda jilibka Karanga ee qawmiyadda Shona ee aqlabiyadda ka ah dalka Zimbabwe.
Karangas waa jilibka ugu ballaaran ee Shona dadka qaarna waxay u arkaan in ay tahay markoodii ay awoodda qaban lahaayeen, ka dib 37 sano oo ay awooda harreeyeen qawmiyadda Zezuru ee uu ka soo jeedo Mugabe.
Ciidammada Zimbabwe ee kor ku sawiran ayaa faraha la galay dagaalkii DR Congo iyagoo dawladda la safan
Madaxweyne Robert Mugabe (bidix) iyo Joshua Nkomo
Robert Mugabe oo xabsi-guri la geliyay
Warbixin ay 2001-dii soo saartay Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in Mnangagwa loo arko ninka qaabeeya hawlaha ganacsi ee xisbiga Zanu-PF".
Arrintaas ayaa badanaa lala xiriiriyay hawlaha ciidammada Zimbabwe iyo ganacsade u dhashay jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Kongo
Muuqaalka cabsida leh ee Mnangagwa wuxuu yimid intii lagu gudo jiray dagaalkii sokeeye 1980yadii kaas oo u dhaxeeyay xisbiga Zanu ee Mugabe iyo kii Joshua Nkomo ee Zapu.
Taageereyaasha xisbiga Zanu-PF ee Robert Mugabe
Markaas oo uu ahaa wasiirka amniga wuxuu sidoo kale xukumay xarruntii dhexe ee sirdoonka CIO, taas oo ay milatarigu u adeegsadeen in ay ku caburiyaan Zapu.
Kumannaan ruux oo shacab masaakiin ah ayaa la dilay, kuwaas oo badankooduna ay ka soo jeedeen qawmiyadda Ndebeles oo loo arkayay taageerayaasha Zapu, ka hor intii labada xisbi aysan isku darsamin ee aysan kumidoobin Zanu-PF.
Wuxuu ku soo tababartay Shiinaha
Mnangagwa ayaa loo arkaa in uu ku naalooday taageerada dad badan oo dagaallada ka soo qaybqaatay kuwaas oo soo hogaamiyay ol'olihii ka dhanka ahaa beeralaydii caddaanka ahayd iyo mucaaradkii 2000 ka dambeeyay.
Dadka reer Zimbabwe ayaa dagaal kharaar u galay xornimada taas ayaana gacan ka gaysatay soo caan bixidda Mnangagwa
Waxay u muuqataa in Grace Mugabe oo ah xaaska madaxweynaha in ay cantuugtay wax aysan liqi karin markii ay faraha la gashay Mnangagwa
Waxay ku xasuustaan in uu yahahay mid ka mid ah dadkii hogaamiyay dagaalkii xorriyadda ee 1970yadii, ka dib markii uu tababar ku soo qaatay Shiinaha iyo Masar.
Wuxuu sidoo kale soo dhigtay iskuulka afkaarta ee Beijing School of Ideology, kaas oo uu gacanta ku hayo xisbiga Shuuciga ah ee Shiinaha.
Mnangagwa (midig) ayaa wakhti dheer la soo shaqeeyay Mugabe
Madaxweynihii Maraykanka ee la kulmay aabeyaashii xorriyada Afrika
"Caadifaddaa I qaaday oo maskaxda kamaan shaqaysiin markii aan ka hadlayay arrinta amiirad Ladiifa"